Ntughari: Mfe Aghụghọ Iji Gbaa mbọ hụ nchekwa Nchedo
Onye ọ bụla na-abanye na ịntanetị ga-eji ozi-e mee ihe ụfọdụ ma hà chọrọ ma ọ bụ na ha achọghị. Otu email na-eguzo dị ka nkwupụta okwu "de facto", ebe ụlọ ọrụ na-anọgide na-eji email iji kpọtụrụ ndị ọzọ, nke a bụ ihe na-agaghị agbanwe agbanwe.
Eziokwu ahụ bụ na onye ọ bụla nwere ohere ịnweta email bụ isi ihe mere ha kwesịrị iji gbalịa ihe niile ha nwere ike iji chebe megide nje virus, ransomware, na malware zigara email - pajaritas de colores. Ka ndị ụlọ ọrụ na-anọgide na-emeso ozi ndị ka njọ site na ozi ha, ndị na-agba ọsọ na-ewere ha dị oke ọnụ ma na-agbalị ihe ọ bụla iji jide ya.
Ụfọdụ n'ime ọrịa ndị na-ebutekarị bụ n'ihi enweghị njikwa na iji ozi-e. Artem Abgarian, Semalt Onye Ahịa Nlekọta Ọrụ, kwadebere ndepụta nke ụzọ iji nweta ozi ịntanetị:
Ebudata Mgbakwụnye si Unknown Senders
Ọ bụ ndụmọdụ kachasị mfe mmadụ nwere ike inweta. Ọ bụrụ na ozi email abata na igbe mbata na onye na-ezipụ adịghị ka ọ maara, kpofuo email ozugbo. Ụfọdụ n'ime ndị omempụ n'oge a ejiriwo ụzọ ọhụrụ ha mepụtara echiche nke mkpa ma ọ bụ ngwa ngwa na ozi ịntanetị ha. Mgbe ị na-emeghe ozi ịntanetị ndị a, ndị ọrụ na - achọpụta na ha ga - agbakwunye ya.
Ndị na-eme ihe ike na-eji ọbụna ihe nchọgharị kachasị mma iji zoo koodu ọjọọ ha. Ndị ọzọ na-achọ iji usoro ịme ihe na-apụta dị ka a ga-asị na ha bụ ndị ziri ezi ziri ezi. Nkwupụta ụtụ na-enye ha ohere iji usoro mgbagwoju anya mee ka o yie ka ha bụ isi okwu email na adreesị sitere na isi mmalite. Nọgide na-elele anya maka ozi ịntanetị dịka ha na-etinye nnukwu egwu na ozi email nile..
Ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ agaghị ama nke a, mana .doc na .docx ndị ọzọ bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu na ndị omempụ na-eji iji gbasaa ozi ịntanetị na malware. O doro anya na akwụkwọ Microsoft Word na-erite uru dị ukwuu site na "atụmatụ" ndị a. Ka o sina dị, ndị omempụ nwere ike iji ha mee nje virus dị ize ndụ.
Ugbua, e nwere akụkọ banyere mgbapụta mgbagwoju anya, na-agbasa site na ozi ịntanetị, na isi mmalite bụ faịlụ faịlụ. Ya mere, ọ gwụla ma a kwadoro onye na-ezipụ ka ọ bụrụ n'elu-osisi, zere ihe gbasara Okwu ka ha nwere ike ịme nje.
Ekekọrịtala Ozi Nkeonwe
Ka ọ dị ugbu a, nanị ụzọ a maara nke ọma site na ndị omempụ na-abanye n'ime nchekwa cyber-nche maka òtù dị site na phishing, dịka Verizon kwuru. Ọ bụrụ na ndị omempụ na-eme ya, phishing agaghị achọ ọrụ ọ bụla. Ihe kpatara ya bụ na ozugbo ndị ọrụ na-agbasa ozi nkeonwe dị ka paswọọdụ na aha njirimara, ndị omempụ na-abanye n'ime usoro IT ndị a ma zụọ ozi sitere na ozi-e. Mgbe ahụ, ọ na - adị mfe ịwakpo nnukwu ọgbakọ ahụ na - eji nkọwa ndị ọrụ na - arụ ọrụ n'ebe ahụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, mgbalị ntụgharị sitere n'aka ndị ọrụ na-azọrọ na ha bụ ndị ọrụ IT na-achọ ịtọgharịa paswọọdụ ma rịọ ka izipu ozi gbasara onwe gị.
Akwụsịla Pịa Njikọ Na-ejikọta na Email
Ọ bụrụ na mmadụ na-enweta ozi enyo enyo na njikọ ya na ntụziaka iji pịa ya, na-eleghara email ahụ anya mgbe niile. The hyperlinks nyere ebe a nwere ike mfe redirect ka download peeji nke gụnyere malware, Trojans, na nje ndị ọzọ.
Gbanwee okwuntughe mgbe nile
Ijide n'aka na ị nwere paswọọdụ dị iche ugbu a ma bụrụzie ụzọ kachasị mma iji gbochie mwakpo ike. Ndị ọrụ kwesịrị ime nke a ọ dịkarịa ala otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ kwa ọnwa.